လိင်မှုကိစ္စအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် သိထားသင့်တဲ့ ကိုးချက် | Buzzy
လိင်မှုကိစ္စအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် သိထားသင့်တဲ့ ကိုးချက်
လိင်မှုကိစ္စအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် သိထားသင့်တဲ့အရာတွေ
သာမန်လူတစ်ဦးအနေနဲ့ တစ်မိနစ်နမ်းရှုံမှု(kissing) ပြုလုပ်တိုင်း ၂၆ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ် ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အချိန်ကြာလာရင်တော့ တစ်နာရီလျှင် ကယ်လိုရီ ၁၅၀ လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်နှစ်ကို သုံးပေါင်ကိုယ်အလေးချိန် ကျစေနိုင်ပါတယ်။
သာမန်လူတစ်ဦးအနေနဲ့ တစ်မိနစ်နမ်းရှုံမှု(kissing) ပြုလုပ်တိုင်း ၂၆ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ် ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အချိန်ကြာလာရင်တော့ တစ်နာရီလျှင် ကယ်လိုရီ ၁၅၀ လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်နှစ်ကို သုံးပေါင်ကိုယ်အလေးချိန် ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ၁၅ ရာစုမတိုင်ခင်က အာရှမှာတော့ လိင်အဂါင်္ထိပ်ပိုင်းကိုပဲ ဖုံးအုပ်ဖို့ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကိုတော့ ပိုးထည်ဒါမှမဟုတ် သိုးအူနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ အပြင်းအထန် ခေါင်းကိုက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ.အဖော်နဲ့ ချစ်မှုပြုလိုက်ခြင်းက သူ့ကို ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကနေ သက်သာသေနိုင်ပါတယ် ။ လိင်ကိစ္စဟာ သဘာဝအားဖြင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းပါတယ်။
သုတ်မှာတွေ့ရတဲ့ ပရိုတိန်းဓါတ်ဟာ အသားအရည်ကို တင်းရင်းစေပါတယ် ။ ခန္တာကိုယ်မှာ တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ သုတ်ရည်တွေ ခြောက်သွေ့သွားပြီးတဲ့အခါမှာ ပရိုတိန်းတွေဟာ အရေပြားတွဲကျမှုကို လျှော့ကျစေပါတယ်။ အချို.အတွက်တော့ ဒါဟာ သဘာဝ ခရင်ပါပဲ။
5. Blow Gal
“blow job” ဆိုတာရဲ. မူလပထမ အစဟာ ရှေးဟောင်း Victorian ကာလတွေတုန်းက ပြည့်တန်စာတွေကို နှိမ်ချပြီး “blowsy.” လို့ ခေါ်ဝေါ်ရာကနေ လာတာပါ ။ ယုတ်ညံမှုကို ကိုယ်စားပြုဖို့ ရည်ရွယ်သုံးနှုန်းခဲ့ဟန် ရှိပါတယ် ။
6. Male Pornography
အမျိုးသားတွေ အနေနဲ့ အပြာဇာတ်ကား/ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်တာဟာ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ခန္တာကိုယ်ထဲက သုတ်ရည်တွေကို ထုတ်ပစ်ဖို့ပါပဲ ။ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ကြည့်ခြင်းထက် ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ရှုပြီး သုတ်ထွက်အောင် ဆန္ဒဖြေဖျောက်ကြတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဆိုပါတယ်။
7. Fun Sex
ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ သတ္တဝါတွေထဲမှာ လူသားဟာ လိင်ကိစ္စက ရရှိတဲ့ သာယာမှုကို နှစ်သက်သူတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးထဲပါ ။ လူသားအပြင် လင်းပိုင်တွေနဲ့ Bonobo chimps ကောင်လေးတွေဟာလည်း လိင်ကိစ္စအမျိုးမျိုး ပြုမူရခြင်းကို နှစ်သက်ကြပါသတဲ့။
8. Animal Prostitutes
လူသားတစ်မျိုးထဲကပဲ လိင်ကိစ္စမှာ သာယာတက်တာ ၊ အလုပ်အဖြစ် လုပ်တက်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ပင်ဂွင်းအမတွေဟာလည်း ပြည်တန်ဆာအဖြစ် လုပ်ကိုယ်တယ်လို့ ထင်ရှားပါတယ် ။